အခြား အလှပြင်ကိရိယာ တင်သွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ - China other beauty tools manufacturers
MURAN ဖုန်စုပ်စက် အမည်းစက်များကို ဖယ်ရှားသည့် စက်သေနတ် ဘောပင် microdermabrasion အဖြူရောင်ခေါင်းများကို အရေပြားတင်းကျပ်စေသည့် စုပ်ယူမှုကိရိယာ
မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေ၊ ဝက်ခြံတွေ၊ ပိုးမွှားတွေ၊ အညစ်အကြေးတွေကို စုပ်ယူပေးနိုင်တဲ့ ဘက်စုံသုံး စုပ်စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ မျက်နှာအသားအရည်က သင့်အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပြီး ပိုမိုနုပျိုပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းနေစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ပိုချစ်စရာကောင်းချင်လားတစ်ခုရယူပါ၊ ရက်အတော်ကြာအသုံးပြုပြီးနောက် အံ့ဖွယ်အမှုများ သိသိသာသာ ပေါ်လာပါမည်။သုံးပြီးရင် အမဲစက်တွေ လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂါရပ်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်- - ထုတ်ကုန်သည် ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက် ergonomics နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးတွင် တစ်ခုတည်းသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။- di ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အဆင့်သုံးဆင့်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ- 1. အမည်းစက်များကို ဖယ်ရှားပါ၊ နက်ရှိုင်းစွာ သန့်စင်သော မျက်နှာ အမည်းစက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ဖုန်စုပ်စက် blackhead remover ဖုန်စုပ်စက် အမည်းစက် ဖယ်ရှားခြင်း လေဟာနယ် 2. ဝက်ခြံ၊ ဝက်ခြံ အသားအရေ အတွက် ကုသခြင်း 3. အသားအရေ လျော့ရဲခြင်း နှင့် အရေးအကြောင်းများကို ကုသခြင်း 4. အစွန်းအထင်းများနှင့် မွဲခြောက်နေသော အသားအရေ အတွက် ကုသခြင်း ၊ ကုန်ပစ္စည်းအမည် ဖုန်စုပ်စက် အမည်းစက် ဖယ်ရှားရေး မော်ဒယ် NO MC003 အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OEM/ODM ပစ္စည်း- ABS နှင့် ပလပ်စတစ် အင်္ဂါရပ် ဝက်ခြံကုသခြင်း၊ အမည်းစက်များကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ချွေးပေါက်များကို သန့်စင်ပေးခြင်း၊ ချွေးပေါက်များ ကျုံ့သွားခြင်း USB အားသွင်းရေ...
မျက်နှာထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တိုက်တေနီယမ် ZGTS Derma Roller 192 အပ် CE Certificate သက်သေပြထားပြီး၊
Dermaroller သည် သင့်အတွက် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။
1. အရေးအကြောင်းများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ ဝက်ခြံများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ အမာရွတ်များကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ပြန်လည်နုပျိုစေခြင်း။
2. site ၏ကျဉ်းမြောင်းသောအာရုံ (glabellum၊ အရေးအကြောင်း၊ အမာရွတ်)
3. ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေပါသည်။
4. striate gravidarum ကုသမှု
5. အရေးအကြောင်းများနှင့် လိုင်းကောင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
6. ဝက်ခြံအမာရွတ်များနှင့် ဒဏ်ရာများကို ကုသပေးခြင်း
8.dermaroller သည် အရေပြားထိန်း ကုသခြင်း အမျိုးအစားများအတွက် အလွန်ထိရောက်သည်။
အသေးစားလျှပ်စစ်မီးသွေး အမည်းစက် ဖယ်ရှားရေး ဖုန်စုပ်စက် အားပြန်သွင်းနိုင်သော ကိရိယာ မျက်နှာသန့်စင်စက် စုတ်ယူခြင်း တူရိယာ
အမည်းစက်များဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို သင်သိပါသလား။အမည်းစက်ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း- မသန့်ရှင်းခြင်း၊ ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ကျစ်လစ်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ horny ထူလာခြင်း၊ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု အားနည်းခြင်း။Cuticle ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့, အမည်းစက်များပေါ်လာ။ချွေးပေါက်များသည် အမဲရောင် သို့မဟုတ် အနီရောင်ရှိသော ဝက်ခြံများ ပေါ်လာပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဝက်ခြံအချွန်များထွက်တတ်သည်။ကုန်ပစ္စည်းအမည် Mini လျှပ်စစ်မီးသွေး blackhead Remover လေဟာနယ် အားပြန်သွင်းနိုင်သော ကိရိယာ မျက်နှာသန့်ဆေး စက်စုတ်ယူကိရိယာ Model NO MC001 အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OEM/ODM ပစ္စည်း- ABS & Plastic Fea...
အပူဆုံး!!!ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် derma roller540 ဆေးထိုးအပ် dermarollermicroneedletitanium မိုက်ခရိုဆေးထိုးအပ်၊
Derma Roller ဆိုတာဘာလဲ။
Dermaroller သည် ဆေးထိုးအပ်များစွာဖြင့် ထွင်းထားသော တုတ်တံကို အသုံးပြု၍ အလုပ်လုပ်သော အာဟာရအရည်နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ကုသရန် လိုအပ်သောနေရာများတွင် ပုံမှန်လူးပေးသည်။ ၎င်းသည် ငါးမိနစ်အတွင်း အရေပြားအတွင်းပိုင်းရှိ သေးငယ်သောရေယာဉ် 300,000 ကျော်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ပြီး ထိရောက်သော အာဟာရပေးပို့မှုစနစ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ epidermis နှင့် subcutaneous တစ်ရှူး။ထို့နောက် အဟာရအရည်များသည် အရေပြားအတွင်းသို့ ထိရောက်စွာဝင်ရောက်နိုင်သည်။ထို့ကြောင့် အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု၏အာနိသင်သည် ပိုမိုပြီးပြည့်စုံလာပါသည်။
Micro-needle ကုထုံးသည် ထိရောက်မှု၊ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို လျော့ချပေးခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများနှင့် လိုင်းကောင်းခြင်း၊ အကြောပြတ်ခြင်းများ၏ အသွင်အပြင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ရေခဲခြစ်ခြင်းနှင့် ရေကျောက်အမာရွတ်များ၊ အသားအရေ ပြန်လည်နုပျိုလာစေခြင်းနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တိုက်ဖျက်ပေးသော အစက်အပြောက်များနှင့် နေလောင်ဒဏ်များကို သက်သာစေပါသည်။
Acne Remover Needle သည် stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အလှပြင်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤ Acne Remover Needle တွင် ကွင်းပတ်တစ်ခုနှင့် အချွန်အတက်တစ်ခုရှိသည်။ဝက်ခြံတွေ ညှစ်ထုတ်ဖို့ အဆင်ပြေတယ်။
ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးပြီးတာနဲ့ ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာကို ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ လိမ်းပြီး ချွေးပေါက်တွေ ပွင့်လာတဲ့အခါ သုံးပေးပါ။
လိုအပ်ပါက အပ်ကိုသုံး၍ သင့်ချွေးပေါက်များ မရင့်ကျက်ပါက အရေပြားမျက်နှာပြင်ကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပါ။